/Blog/Ithala/I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike ye-Armodafinil
ezaposwa ngomhla 09 / 11 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
I-Amodafinil yiphilisi ye-psychostimulant eyenziwa yiCelphalon Pharmaceuticals kwaye ivunyiwe yi-FDA ngoJuni 15, 2007. I-Amodafinil yi-(-) - (R) -nantiomeresi isithako esisebenzayo kwi-modafinil yeziyobisi ezidlulayo. I-Armodafinil ngumsizi we-drug modafinil (Progivil)
Armodafinil powder, njenge-modafinil, inezinto ezintathu ezisetyenziswayo:
• Ukukhuthaza ukuvuswa kwiimeko zokulala ngokugqithiseleyo kunye neengxaki zokuhamba
• Isiza esetyenziselwa unyango lwengqalelo yokungaphumeleli kubantwana nakubantu abadala
• Isetyenziswe kubantu abamele benze iinguqu ezijikelezayo, kuba kuvumela ukuphepha ukulala oku kunokuvelisa ukutshintshwa kweeyure kwiwashi ye-biological yabantu.
• Isetyenziswe ngabafundi abathile ukuphucula uxinzelelo.
Inkampani yaseCephalon iphinda ifune kunye nezicwangciso zokuqhuba iinjongo ngenjongo yokuphonononga i-armodafinil (Nuvigil) yokonyango kwezinye izifo ezingapheliyo ezifana ne-bipolar disorder, schizophrenia, kwakunye nokulala nokukhathala kwiimeko ezifana ne-Parkinson kunye nomhlaza.
Armodafinil Isingeniso esakhiweyo
I-Armodafinil iyinxalenye ye-eantiomeric ye-eugeroidal modafinil (Provigil). Iqukethe kuphela (R) - (-) - inantiomere ye-modafinil ye-racemic.
Igama lezorhwebo uNovigil
Inombolo ye-CAS: 112111-43-0
Ukubonakala kwenyama: imhlophe imhlophe
Ubunzima: 1.283g / cm 3
I-Melting point: 156-158oC
Uxinzelelo lweVapor: 1.56E-12mmHg kwi-25 C
Inkcazo yokuHlola: 1.645
Isicatshulwa sivunyiwe eUnited States ukwenzela ukunyangwa kobusuku bokulala emini kwizigulane ezingaphezu kweminyaka eyi-18 edibene ne-obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), i-narcolepsy, okanye i-shift worker syndrome.
Inkcazelo elula ye-Armodafinil powder
Isiboniso se-armodafinil sifana ne-modafinil. I-US FDA iyavuma i-almodafinil njengonyango lwe-narcolepsy, i-apnea syndrome yokulala kunye nokukhubazeka komsebenzi wokulala, i-Alzheimer's, ingxaki yokuphuhliswa.
I-Amodafinil yi-L-mododafin kwaye iyona isithako esisebenzayo kwisimodafinil. I-200 mg ye-modafinil kwi-modafinil yesandla sokunxele kunye nekhohlo nganye iyalingatha isiqingatha, kodwa i-modafinil yokunene ibanjelwe kwii-4 iiyure, ukusetyenziswa kwehlisiwe, i-modafinil ithathe iiyure ze-2 Imiphumo kukuba ukuphakama kwegazi ifike kwiiyure ze-4. Kwinqanaba eliphezulu, i-L-mododa akhawunti ye-90%, kwaye ukulungiswa kwesandla sokunene kushiya i-10%. Emva kweyure lesine, uModa udlala indima enkulu. NguL-mododafin. Umphumo we-amodafinil unamandla kakhulu. Ukuba uModa uzama ukuphaphama, ngoko u-Amoda angagxininisa kwaye ahlale ephapheme, gxininisa ngakumbi, kwaye unemiphumo embalwa yecala. Ekugqibeleni, kuya kufaka indawo ye-modafinil. I-Amoda inezihlandlo ezintathu zokuthandana kwamaprotheni e-plasma, ngoko iyakwazi ukubopha kwiiprotheni zeplasma ngokuthe ngqo. Ngoko ke, ukuxinwa kwe-amoda engena kwingqondo ngegazi kakhulu. Uhlobo luka-Amoda lobuchopho luphindwe kathathu lweModa.
Isiqingatha-ubomi se-amodafinil ngamahora e-13-15. Imiphumo emibi ayifanele.
Ukulawulwa okuqhubekayo kwe-amodafinil, ukuxinwa kweziyobisi egazini kuya kuqhubeka nokugxotha, ngenxa yokuba ingxubevange yegazi yegazi ayinakunyulwa, isilya esitsha singene egazini, ukuhamba ngokuqhubekayo ukuthatha i-amodafinil kuya kulibazisa ukufika kwegazi eliphambili.
I-Armodafinil ikhula ngokukhawuleza kwizigulane ezinobunzima obunzima. Isebenza ngempembelelo ngokufumana i-receptor ethile ye-neurotransmitter kwaye ivuselela inkqubo ye-nervous sympathetic system. Indlela echanekileyo yezenzo, njengeModafinil, ayiyazi. I-in vitro, akukho mpawu ngqo okanye engathanga ngqo njengoko i-1 -adrenoceptor-okanye i-dopamine receptor agonist ingafunyanwa. Ikhono le-armodafinil ukuhlala livukile lifana ne-amphetamine, nangona ihluke kuyo kwiprofayili yayo.
I-half-life-life of the enantiomers ye-modafinil ihluke ngohlobo lwe-3 komnye. I-pharmacokinetics ye-Armodafinil i-dose-ezizimeleyo kunye ne-linear kwi-50 ukuya kwi-400 mg. Isilwanyana siphumelele ngokukhawuleza kwaye sisetyenziswe kwisibindi kwiimetabolites ezimbini ezibalulekileyo. I-Armodafinil kunye ne-metabolites yayo ixutywe kakhulu ngeentso. Kwizigulane ezinobungozi obunzima okanye obuthathaka, inqanaba kufuneka linciphise.
I-Armomafinil isilwanyana somlomo. Kwimarike, ngokomthetho, i-50 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg. Kwabantu abaneemalmalia, kufuneka baqhutywe kwi-150-250 mcg ngosuku.
I-Armodafinil powder i-metabolised yi-cytochrome i-P450 3A4 kwaye inqanda ezinye iincinci ze-cytochrome ze-P450 intsapho ye-enzyme. Kukhona amandla okusebenzisana nezinye iziyobisi ezininzi, eziye zivimbele okanye zenze i-cytochrome efanayo i-P450 subtypes. Ezi zibandakanya ikakhulukazi zokukhulelwa komlomo, iziyobisi zonyango lweengxaki (i-anticonvulsants), i-anticoagulants (i-anticoagulants), i-anti-depressants okanye i-cyclosporine ye-immunosuppressant.
Imiphumo echaphazelekayo echazwe yile: yintloko, isicongconi, isisu, ukuphazamiseka kokulala. I-Armodafinil inokubangela ukunyamezela ukuguquka kwemizimba efana ne-rashes okanye intsholongwane yefihla. Ingxaki ekhulayo yesikhumba, njengaleyo ebonwa ngolu hlobo lwe-modafinil, kuquka ne-Stevens-Johnson syndrome, ayifakiwe kwaye ifuna ukuyeka ukukhawuleza kwonyango.
I-1.Armodafinil kunye ne-Modafinil ziyizidakamizwa ezingezo-amphetamine ezikhuthaza ukuvuvukala nokunceda abantu bajamelane ne-apnea yokulala, i-narcolepsy okanye ubuthongo obunzima buhlala busebenza. ... Ekuqaleni, i-Modafinil yayisetyenziselwa ukuphatha i-narcolepsy nokuphucula ukuvuka
2. I-Armomafinil ifumaneka nge-50 mg / 150 mg / 200 mg / 250 mg. I-Modafinil ifumaneka kuphela njenge-100 / 200 mg.
3. Ubomi benkonzo ye-Armodafinil ngamahora e-15, ngelixa Modafinil powder iiyure ze-12. Impembelelo ye-Armodafinil ngamahora e-8, ngoxa i-Modafinil ihlala i-6 kwiiyure ze-12.
4. I-Farmafinil ifinyelela kwi-concentration ye-concentration yayo emva koko, isizathu sokufikeleleka kwe-systemic side, kwaye ixesha lide kuneModafinil. Ukongeza, ukuba uthatha i-150 mg ye-Armodafinil, i-200 mg ye-Modafinil iya kufuneka. Ngenxa yokusebenza kwexesha elide, Armodafinil powder kuthathwa njengeyona nto ibhetele kakhulu, nangona oogqirha bezempilo bathi bobabili bafana, kwaye iziphumo zihlala zifana.
Ukwenza isigqibo malunga nokusetyenziswa kweyeza, inzuzo yokuyisebenzisa kufuneka ibe ngaphezu kokulimaza, kwaye wena kunye nogqirha wakho kufuneka unqume ukuba ungayisebenzisa yini iyeza okanye cha.
Izifundo ezifanelekileyo azizange zenziwe ngobudlelwane obuphakathi kweminyaka kunye nomphumo we-armodafinil kubantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-17 ubudala. Ukhuseleko kunye nokusebenza kwezi zibisi akukasekwa.
Nangona kungekho zifundo eziqhutyelwe ubudlelwane obuphakathi kweminyaka kunye nomphumo we-armodafinil kubantu abadala, iingxaki ezinxulumene nokuguga azilindeleke ukuba zinciphise ukukwazi ukusebenzisa i-armodafinil kubantu abadala. Nangona kunjalo, izigulane ezisebekhulile zingasuswa ngokukhawuleza kwezi ziza zivela emzimbeni, ezingadinga ukulungiswa kwezilingo kwizigulane ezithoba i-armodaphaphine.
Ukuhlelwa kwe-armodafinyl ekukhuleleni (C). Izifundo zezilwanyana ziye zabonisa impembelelo emibi kwaye akukho zifundo ezaneleyo zokukhulelwa kwabantu. Akukho zifundo zezilwanyana kwaye akukho zifundo ezaneleyo zokukhulelwa kwabantu.
Qaphela, awaziwa ukuba ngaba le chiza lichithwa ngobisi lwebele lomntu.
Ukusebenzisana kunye nokusebenzisana kweziyobisi
Nangona amanye amayeza akufanele asetyenziswe ecaleni ngokusisigxina, kwezinye iimeko izidakamizwa ezimbini ezahlukeneyo zingasetyenziswa kunye nokuba zibandakanya iziyobisi. Kwale meko, ugqirha wakho unyanzelekile ukuba atshintshe umthamo, okanye ezinye izilumkiso ezinokuba ziyimfuneko. Xa uthabatha eli liyeza, kubalulekile ukuba ugqirha wakho uyazi ukuba uthatha nawaphi na amayeza achazwe ngezantsi. Ukubambisana okulandelayo kukhethwe ngokubaluleka kokubaluleka kwabo, okungabikho konke okubandakanya.
Iziyobisi ezidibeneyo Armodafinil powder
Amanye amayeza akufanele asetyenziswe okanye ekufutshane nexesha lokutya okanye ukutya iintlobo ezithile zokutya kuba ukusebenzisana phakathi kweyeza kunye nezinye iintlobo zokutya ziyakwenzeka. Ukusetyenziswa kotywala okanye ucuba kungakhokelela ekusebenzisaneni kwezidakamizwa. Xoxa nodokotela ngokusetyenziswa kweliyeza ngokutya okanye utswala, okanye ucuba.
Ubukho bezinye iingxaki zonyango bunokuchaphazela ukusetyenziswa kwale mayeza:
Ukuxinezeleka okanye ukufumana imbali yalo, okanye uxinzelelo lwegazi oluphezulu, ukugqithisa, okanye ingqondo: sebenzisa amayeza ngokulumkisa. Ezi meko ziba zibi.
I-hypertrophy ye-ventricular hypertrophy, okanye i-mitral valve iyawa: akufanele isetyenziswe kwizigulane ezinemiqathango.
Izifo zesibindi (ezinzima): zisetyenziswe ngokulumkisa. Imiphumo yeziyobisi inokunyuka ngenxa yokususwa kwayo ngokukhawuleza kumzimba.
Thatha la mayeza kuphela njengoko ufundiswe ngugqirha wakho. Musa ukwandisa umyinge weziyobisi, kwaye ungakwandisi inani lamaxesha athatywayo, kwaye ungayisebenzisi ixesha elide kunokuba ugqirha ugqibe.
Eli liyeza liza kunye neNgcaciso yolwazi lweMonde (i-Internal Bulletin). Kubalulekile ukuba ufunde kwaye uqonde le ngcaciso. Qiniseka ukuba ubuze ugqirha wakho ukuba unemibuzo.
Ukuba unesifo sokuphefumula ukulala kwaye usebenzise ingcinezelo eqhubekayo yokuhamba ngomoya ebusuku, qhubeka usebenzisa le divayisi ngamachiza.
Thatha eli liyeza ngexesha elifanayo ngalunye suku. Musa ukutshintsha ixesha lokuthatha iyeza ngaphandle kokuthetha nodokotela wakho kuqala.
Unokuthatha eli liyeza kunye okanye ngaphandle kokutya.
Kanye kunye neziphumo zonyango zonyango, le nkunkuma ingabangela ezinye iziphumo ezingathandekiyo. Nangona kungekhona zonke iziphumo zempembelelo ezinokuthi zenzeke, kodwa ukuba uyenzayo, ufuna uncedo lwezonyango.
Dibana nodokotela wakho ngokukhawuleza ukuba kukho na ezi ziphumo zilandelayo:
I-blisters, ukutshisa, ukutshisa, ukuma, okanye ukulahleka kwebala
Ukuqhayisa, ukuphazamiseka, okanye ukuva
Ukukhawuleza okanye ukunyaniseka kwentliziyo
Inwele entle eneentlungu
Ukwandisa inani lokuhamba
Ukutshabalala, okanye ubomvu obunzima, okanye umkhonto, okanye isikhumba esivimbayo
Inyikima emilenzeni, iingalo, izandla okanye iinyawo
Kubalulekile ukuba ugqirha wakho ahlole inkqubela yakho kunye neyeza ukutyelela rhoqo ukuqinisekisa ukuba isilwanyana sisebenza kakuhle kwaye siqinisekise ukuba akukho miphumo engathandekiyo.
Eli nyanga aliyifaki indawo yokulala ngokwaneleyo. Eli gama kufuneka lisetyenziswe kuphela xa eso sifo sifumaneka njengesifo esiyinyanisekileyo, ukuphazamiseka kokuphefumula kokulala (okubizwa ngokuba yi-apnea syndrome), okanye iingxaki zokulala ezibangelwa yi-psoriasis.
Eli gama linokubangela iintlobo ezinzulu zokwehla, kuquka u-hypersensitivity kunye ne-edema ye-vascular.
Yeka ukusebenzisa le mayeza kwaye ukhangele ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba unayo impawu ezilandelayo: isilonda, ukuhlutha, ukuguqula isikhumba, ukukhwehlela, ukukhwehlela, isifo sohudo, umkhuhlane, okanye intlungu yomzimba okanye intlungu. Okanye izilonda zesikhumba ebomvu. Okanye emqaleni; izilonda, okanye amabala amhlophe emlonyeni okanye emlonyeni. Okanye ukukhathala okanye ubunzima obungavamile.
Musa ukuqhuba imoto, ungasebenzisi umatshini, ugweme ukwenza nantoni na into enokuba yingozi xa ungaqaphelanga, ngoko uyazi ukuba uphendule njani le mayeza.
Kungabangela abanye abantu ukuba bacaphuke, bacaphuke, okanye babe nezinye iimpawu ezingavumelekanga. Kwangathi kubangele abanye abantu bazibulale okanye bafune ukuxinezeleka.
Ngaphambi kokwenza nayiphi na imvavanyo yezokwelapha, xelela udokotela ukuba uyathabatha eli liyeza. Iziphumo zeemvavanyo ezithile zinokuchaphazeleka eli liyeza.
Musa ukuthatha amanye amayeza ngaphandle kokuba uxubushe nodokotela wakho. Oku kuquka amachiza angagunyazisiyo okanye angagunyazisiyo (ii-OTCs), izongezo zamanzi okanye iivithamini.
Gcina loo mayeza kwisibindi esitywinwe kwiqondo lokushisa lokushisa, kude nobushushu, umswakama kunye nokukhanya okuthe ngqo.
Gcina iyeza ngaphandle kwabantwana.
Musa ukugcina iyeza eliphelelwe lixesha okanye amayeza angasadingeki.
Cela umqeqeshi wakho wezempilo ukuba ulahle njani nawaphi na amayeza awusayisebenzisi.
I-10 ephezulu yehlabathi yokuthengiswa komzimba	I-7 Best Nootropics (SmartDrugs) kwimarike -Phenylpiracet